Indlu esemaphandleni, eSouth Downs National Park - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni, eSouth Downs National Park
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAntonia
Indlu esemaphandleni yindlu esemaphandleni, ekwindawo ephakathi kwiSouth Downs National Park ekugqibeleni kweemayile eziyi- ngemoto kwifama yabucala kufutshane neGraffham. IBarn Cottage ithule, ipholile kwaye yindawo entle yokuhlala ixesha elifutshane okanye indawo yeholide yeentsapho, abahlobo, kuquka nomhlobo wakho onemilenze emine. IWesterlands yifama ehlaziyiweyo egxile ekuvuseleleni kwakhona nasekubuyisweni kwezindlu zeholide ezakhiwe ngamaplanga. Intsapho engumnikazi wefama iyazithanda izilwanyana kwaye inceda ukubuyisela iindawo zendalo.
Utshintsho lwethu oluzinzileyo lunegumbi lokulala elikhulu eliyi-1 kunye nebhedi enkulu. Kukho elinye igumbi lokulala elinebhedi enkulu elala abantu ababini enye. Enye ibhedi enobukhulu obuphindwe kabini ikumgangatho osezantsi okuthetha ukuba le ndlu inokuhlala iindwendwe eziyi-7 lula. Izinto zethu zokondlula ibhedi zikwenza uzive uthe zava, zenziwe ngendlela efanelekileyo ibe azinamachiza ayingozi. Cinga ngobunewunewu bezihlangu!
Kukho igumbi lokuhlambela elinebhafu, ishawa, indlu yangasese nesinki kumgangatho osezantsi kwaye igumbi lezinto eziluncedo linomatshini wokuhlamba impahla nowokomisa i-umble, ibhodi yokuayinela neayini.
Ikhitshi lale mihla, elinokukhanya nelingena umoya, indawo yokuhlala/yokutyela inefenitshala etofotofo Isofa neSofa, ii-blinds ezintle kunye nefenitshala esemgangathweni.
Indlu esemaphandleni eyakhiwe ngamaplanga - yanele ngekhitshi elinento yokuxhoma umbane/ioveni/i-microwave, i-friji-freezer, umatshini wokwenza ikofu nazo zonke izinto zokupheka ozidingayo. Kukho neWifi entle kunye neSmart TV.
Zonke iimveliso ezikwindlu zikhethwe ngokuziphatha nangendlela engayonakalisiyo indalo, nalapho kunokwenzeka ukuxhasa amashishini asekuhlaleni, amachule. Izinto zendalo ezilinganayo yinto ebalulekileyo kule ndlu.
Le ndlu igcina uninzi lwezinto zayo ezingaqhelekanga, kwaye yonwabela igadi yayo yabucala, elungele umhlobo wakho onemilenze emine ukuba atshise i-steam epholileyo xa ukonwabela ukubona ubuhle beSouth Downs. Kukho nezitya zezinja kunye nezinto ezimnandi ezikhoyo.
Le ndlu inesitulo sokutyisela usana, ikhothi yokuhamba, imethi etshintshayo, iipleyiti zabantwana, iimagi nezinto zokuhombisa, kunye nemidlalo emininzi, okuthetha ukuba ungahamba lula.
Amaqanda amatsha asuka efama ayafumaneka xa kufikwa, njengakwiWesterlands Meadow Honey yethu. Yishiye nje imali yakho kwimbiza yobusi ethetha inyani. Yonwabele!
Sinethamsanqa lokuba kufutshane neebhari ezintle, iWhite Horse, iGraffham, iiCricketers, iDuncton kunye neeBadgers zonke zikumgama omfutshane. Ngexesha lenyanga yasehlotyeni unokuoda ukutya okumnandi kwi-Woodfire Camping
( nceda ubone incwadana yenkcazelo yemenyu yeveki). Inyama ivela efama kunye nemifuno efumaneka kwiGadi yeGood Gut.